Voahaja ny safidinay, hoy hatrany ireo naneho hevitra. Gaga anefa izahay, hoy ireto farany, fa fito volana ihany izay no lasa tsy hitan’ny masonay ny solombavam-bahoaka nofidianay fa hoe : voatana am-ponja. Koa nosaziana noho ny safidinay ve izahay Vahoaka, hoy ny fanontanian’ny olona.
In-droa miantoana izahay, hoy ireto farany, no nandre fa nivoaka ny fonja nitazomana azy, nahazo fahafahana i depiote Leva. Namelona tsirim-panantenana tamin’ny Vahoaka izany, satria hisy hitondra amin’izay izany ny hetahetam-bahoaka, ary roso amin’ny fampandrosoana amin’izay ihany koa amin’ny fanapahana ny hampiasana ny volan’ny CLD.